आर्थिक अनियमितता बारे अदालतमा मुद्दा परेपछि एनआरएनए युकेको विवाद समाधानको पहल गर्न ‘संरक्षक मण्डल’ तात्यो - Himalayamail.com
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युके भित्र देखिएको आर्थिक विवाद समाधानका लागि संरक्षक मण्डल (प्या ट्रान्स काउन्सिल) सकारात्मक पहल अघि बढाउन तयार भएको छ । मंगलबारको संरक्षक मण्डलको भर्चुअल बैठकले एनआरएनए युके भित्रको विवाद समाधान गर्न पहल लिने निर्णय गरेको हो ।
एनआरएनए युके अध्यक्ष पुनम गुरुङले संस्था भित्रको लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युके भित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि संरक्षक मण्डल (प्या ट्रान्स काउन्सिल) सकारात्मक पहल अघि बढाउन तयार भएको छ । मंगलबारको संरक्षक मण्डलको भर्चुअल बैठकले एनआरएनए युके भित्रको विवाद समाधान गर्न पहल लिने निर्णय गरेको हो ।
एनआरएनए युके अध्यक्ष पुनम गुरुङले संस्था भित्रको विवाद समाधानका लागि छलफल गर्न मंगलबार ‘संरक्षक मण्डल’ को बैठक डाकेकी थिइन् । ‘संस्था भित्रको विवाद समाधानका लागि पहल गर्न संरक्षकहरु तयार हुनु भएको छ ।
एनआरएनए युके भित्र देखिएका समस्या समाधान गर्ने र संस्थाका हितमा काम गर्न सल्लाह सुझाव दिने सर्वाेच्च निकाय संरक्षक मण्डल हो । जसमा एनआरएनए युके ‘संरक्षक मण्डल’मा प्रमुख संरक्षक मे. रि. डम्मर घले तथा संरक्षकहरुमा महन्त श्रेष्ठ, अशोक श्रेष्ठ, सूर्य गुरुङ, कुल आचार्य, योगेन वहादुर क्षेत्री, महेन्द्र कंडेल, मुछेत्र गुरुङ र योगकुमार फगामी छन् । बैठकमा घले, गुरुङ, आचार्य, क्षेत्री, कंडेल, फगामी र वर्तमान अध्यक्ष गुरुङ तथा महासचिव फडिन्द्र भट्टराईको उपस्थिति रहेको थियो ।
‘संरक्षकज्युहरुले सवै सँग छलफल गरेर केही दिनभित्रै निकास दिने गरि पहल गर्ने आश्वासन दिनु भएको छ। मलाई आशा छ, अब चाडै एनआरएनए युके भित्रको विवाद समाधान हुनेछ’, अध्यक्ष गुरुङले भनिन् । आर्थिक अनियमिततालगायतका बिषयमा एनआरएनए युकेको विवाद अदालतमा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक ‘संरक्षक मण्डल’को बैठक बसेको हो ।
बैठकमा अध्यक्ष गुरुङले ‘संरक्षक मण्डल’लाई कार्यसमितिका जिम्मेबार साथीहरुबाट नै आर्थिक अनियमितताका बिषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा दर्ता समेत गराएको जानकारी गराइकी थिइन ।
एनआरएनए युके भित्र २०१७-१९ कार्यकालमा आर्थिक अनियमितता भन्ने दावी गर्दै दायर गरिएको मुद्दा डार्टफोर्ड काउन्टी कोर्टमा विचाराधीन छ । संघकै चारजना उपाध्यक्षहरु प्रेम गाहामगर, रामचन्द्र पोखरेल, मोहन कार्की, नारायण कंडेल तथा पूर्व उपाध्यक्ष शेर सुनार र इंग्ल्याण्ड राज्य समन्वय परिषद् उपाध्यक्ष एलविजेड गुरुङले संस्था मा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् । निजहरुले उक्त मुद्धा संस्थाको हिनामिना भएको रकम फिर्ता गरि एनआरएनए युकेको बैंक खातामा जम्मा गर्नु मुख्य उदेस्य रहेको बताएकाछन। उक्त मुद्धाले आफुहरु समेत छानबिनको दायेरामा आएको र कुनै पनि सजाय भोग्न तयार रहेको जनाएकाछन।
(साभार : जिएनएन GNNN)